MUSI wa6 October 2014, pakatangwa nhepfenyuro yeterevhizheni yepaIndaneti iri muChirungu inonzi JW Broadcasting, ichimboedzwa kuti inoita here. * Kubva muna August 2015, iri kushandurirwa mumitauro inopfuura 70 kuitira kuti dzimwe hama nehanzvadzi dzinakidzwe nemapurogiramu aya anosimbisa pakunamata. Pasi rese, vanhu vakawanda vari kuona JW Broadcasting vari kutenda chaizvo urongwa uhwu hutsva. Asi zvii zvakaitwa kuti izovapo?
Paifanira kutsvakwa nzvimbo yakakodzera. Nzvimbo inonyatsoita yakawanikwa pamahofisi makuru eZvapupu zvaJehovha kuBrooklyn, New York, mukati mechivako chiri panhamba 30 Columbia Heights. Muvhiki rimwe chete, nzvimbo yakanga yasarudzwa yakabviswa zvinhu zvese zvaivamo uye Dhipatimendi Rinoona Nezvekugadziridza Zvinhu rakatanga kugadziridza nzvimbo yacho kuti ishandiswe sesitudhiyo. Panguva imwe chete iyoyo, chikwata chevaiita zvemapurani chakadhirowa purani yesitudhiyo yacho ine mutsigo uye iri yemazuva ano. Hama nehanzvadzi dzakawanda dzekuUnited States dzaishanda kubva mangwanani kusvika usiku dzichigadzira purani yesitudhiyo yacho uye kuronga kuti ingavakwa sei nekukurumidza. Tsvakurudzo inowanzotora mwedzi yakati kuti, yakaitwa mumazuva mashoma uye Dhipatimendi Rinoona Nezvekutengwa Kwezvinhu rakabva ratotanga kuodha zvinhu zvakawanda zvaida kushandiswa.
Pakashandiswa tambo dzemagetsi dzakawanda chaizvo, uye hama dzacho dzaifanira kuona kuti zvinhu zvacho zvese zviri kushanda zvakanaka here. Panguva iyoyo, kamumhanzi kanoshandiswa paJW Broadcasting kairekodhwa kumasitudhiyo edu ekuPatterson, uye hama nehanzvadzi dzokunyika dzakasiyana-siyana dzakanga dzauya kuzoridza mimhanzi dzakabatsirawo. Pakugadzirira purogiramu yekutanga, mashoko okushandisa pamavhidhiyo akatanga kunyorwa uye mienzaniso yezvinhu chaizvo zvakaitika yakatanga kugadzirirwa uye hama dzinoita zvekurekodha dzekuBrooklyn, Patterson, neWallkill uyewo dzaiva kune dzimwe nyika, dzakashanda nesimba pakurekodha mavhidhiyo aizoshandiswa. Situdhiyo yacho payakapera kugadzirwa uye michina inoshandiswa payakanga yaiswa, hama dzakatanga kugadzirira mapurogiramu emwedzi mishoma yaitevera.
Situdhiyo yeJW Broadcasting, kuBrooklyn, New York
Patakabvunza mumwe ane ruzivo rwebasa iri kuti zvinowanzotora nguva yakareba sei kugadzira situdhiyo yakakura seyedu, akati zvinowanzotora gore nehafu. Asi hama nehanzvadzi dzedu dzakangoita mwedzi miviri chete!
Zviri kuitika kubva pakatanga chirongwa ichi zvinofadza! Purogiramu yemwedzi mumwe nemumwe iyo inowanzoiswa musi weMuvhuro wekutanga kwemwedzi, inoonekwa kanopfuura ka2 000 000 mumwedzi wacho. Mapurogiramu aya pamwe chete nemamwe mavhidhiyo ose aripo, anoonekwa kanopfuura ka10 000 000 pamwedzi.
“Purogiramu yacho yakaita kuti ndiwedzere kuswedera pedyo nesangano raJehovha uye Dare Rinotungamirira. Ndinoziva kuti ndiri mumhuri ine vanhu vanodanana chaizvo.”—Kenya
Vanhu vaJehovha vari kunzwa sei neurongwa uhwu hutsva? Vakawanda vari kutenda chaizvo urongwa uhwu. Pasi apa pangori nezvakataurwa nevashoma vacho:
“Manheru anhasi tanakidzwa chaizvo! Handikwanisi kutsanangura mufaro wandawana ini nemudzimai wangu pataona JW Broadcasting yaMay 2015. Ichi ndechimwe chezvipo zvinokosha chaizvo zvandakapiwa naJehovha. Tinotenda Dare Rinotungamirira uye hama nehanzvadzi dzose dzakashanda nesimba kuti tive neurongwa uhwu.”—Indonesia.
“Hama dzakawanda dzakanga dzisati dzambonzwa nhengo yeDare Rinotungamirira ichipa hurukuro. Asi iye zvino tava kuvanzwa uye tiri kuvaona vachipa hurukuro. Hatisati tambonzwa tiri pedyo zvakadaro neDare Rinotungamirira pamwe chete nehama dzedu dziri munyika yose!”—Kenya.
“Murume wangu haasi muchokwadi, saka zvakandiomera kuti ndiite kunamata kwemhuri nevana vangu vaviri vari kuyaruka. Kana ndiri seni hangu, purogiramu iyi iri kundibatsira chaizvo. Inoita kuti ndinyatsonzwa kuti ndiri musangano raJehovha uye inondikurudzira chaizvo ini nevana vangu. Ichi chikomborero chaicho chatakapiwa naJehovha.”—Britain.
“JW Broadcasting tinoida chaizvo! Tinototi minyengetero yedu yakapindurwa purogiramu yacho payakashandurirwawo mune mimwe mitauro. Tinokurudzirwa chaizvo patinoona imi hama muchiratidza kuti munonakidzwa nekunamata Jehovha. Kubva pakatanga purogiramu yedu yepaTV, tava kunyatsonzwa kuti tiri nhengo dzesangano raJehovha rakanaka chaizvo uye rinoshamisa.”—Czech Republic.
“Kunzwa mashoko enhengo dzeDare Rinotungamirira mumutauro wangu kuri kuita kuti ndiwedzere kuswedera pedyo naJehovha.”—Brazil.
“Ndava nemakore 16 ndichishumira Jehovha, asi kufara kwandaita nhasi kungangoenzana chete nekwandakaita pandakabhabhatidzwa. Ndinokutendai chaizvo hama dzinodiwa nekutirongera kwamakaita JW Broadcasting.”—Brazil.
Tine chivimbo chokuti Jehovha acharamba achitibatsira zvokuti JW Broadcasting icharamba ichisimbisa hama dzedu pasi rose uye ichaita kuti vanhu vawedzere kurumbidza nokukudza Jehovha.
^ ndima 1 Munhu anogona kuona JW Broadcasting kana akaenda paIndaneti patv.jw.org.